Wasaaradda Amniga oo shaacisay in heegan la geliyay Ciidamada Ammaanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 6 March 2015
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Maxamed Yuusuf oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay inay heleen xog ku saabsan weeraro ay qorsheynayaan in Al-Shabaab ka fuliyaan magaalada Muqdisho.
“Ciidamada Ammaanka heegan sare ayaa la geliyay, waxayna hey’adaha sirdoonka ay heleen xog ku saabsan in kooxda Al-Shabaab ay qorsheynayaan falal argagixiso inay ka fuliyaan Muqdisho”ayuu yiri Maxamed Yuusuf.
Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in ciidamada ay howl gallo dheeraad ah ka wadaan isgoysyada iyo xaafadaha magaalada, isagoo xusay in howl galladu ay yihiin kuwo habeen iyo maalin socda sida uu yiri.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ciidamada ay maalmihii la soo dhaafay ay fashiliyeen weeraro ay Al-Shabaab ka fulin rabeen magaalada Muqdisho, kuna dhibaateyn rabeen shacabka sida uu hadalka u dhigay.
Ciidamo ka tirsan Nabadsugida oo afka u duuban ayaa maalmihii la soo dhaafay lagu daadiyay wadooyinka muhiimka ah ee magaalada, iyadoo ciidamadan baaraya gawaarida iyo dadka saran.
Khilaaf soo kala dhexgalay hoggaanka sare ee Al-Shabaab cabsi laga qabo..